Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Caribbean » Obodo dị ka azụmaahịa na -emepe ụzọ maka obodo Caribbean
Njem azụmahịa • Caribbean • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ụlọ ọrụ International Institute for Peace site na njem nlegharị anya (IIPT) akpọrọ Jamaica HOME OF COMMUNITY TOURISM n'ihi na ebe a bụ ebe Diana McIntyre-Pike nwe ya/onye na-arụ ọrụ nke Astra Country Inn Mandeville mgbe ahụ na Desmond Henry nwụrụ. , onye ntụzịaka njem nlegharị anya gara aga. Ha jikọrọ aka wee mepụta Networkstyle Community Tourism Network (CCTN) iji zụlite njem nlegharị anya obodo ọkachasị n'ụsọ osimiri ndịda Jamaica.
Networkstyle Community Tourism Network enwetala nkwado obodo na mba ụwa.
Diana McIntyre-Pike enwetala ọtụtụ ihe nrite maka atụmatụ a.
Mmemme Obodo dị ka Azụmaahịa (VAB) na-emejuputa ọzụzụ ụbọchị ise nke ndị ọchụnta ego n'ọtụtụ obodo na Jamaica na mpaghara Caribbean.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, CCTN mepụtara otu ndị otu anaghị akwụ ụgwọ akpọrọ VILLAGES AS BUSINESSES (VAB) nke nwetara nkwado obodo na mba ụwa. Networkstyle Community Tourism Network bụ onye otu Network Tourism Network (WTN), na Diana McIntyre-Pike anatala ọtụtụ ihe nrite maka atụmatụ a, nke kachasị ọhụrụ bụ na 2020 sitere na WTN ọhụrụ ahụ dịka otu n'ime ndị ọkachamara njem nlegharị anya 17 ka a ga-enye mba ụwa. Onyinye ndị njem nlegharị anya, mmemme nkwanye ugwu ugwu.
Mmemme Obodo dị ka Azụmaahịa (VAB) na-emejuputa ọzụzụ ụbọchị ise nke ndị ọchụnta ego n'ọtụtụ obodo na Jamaica na mpaghara Caribbean nke ugbu a bụ Mahadum West Indies (UWI) mepere emepe. Ọzụzụ ahụ gụnyere mmepe onwe onye, ​​nyocha nke akụ dị adị na nke nwere ike, mmata gburugburu, njem na nhọrọ ngwaahịa, mmepe azụmaahịa, nchekwa yana usoro COVID. Otu n'ime ndị otu Jamaican Diaspora, Making Connections Work UK, akwadola njem nlegharị anya akụ na ụba VAB na ịzụ ahịa dị ka nche anwụ.
Mbubreyo Desmond Henry
Networkstyle Community Tourism Network (CCTN) kpebiri na nso nso a inwe Jamaican na Caribbean Diaspora dị ka ndị ọchụnta ego ya na azụmaahịa ya. O mepụtala ego pụrụ iche maka njem nlegharị anya obodo akpọrọ COMFUND ya na otu Kọmitii na -anọchite anya obodo. E debanyere COMFUND ugbu a na USA ma ugbu a, a na -ejedebe ya na ụlọ ọrụ ego iji kwado onyinye na itinye ego. Mmasị dị na COMFUND ga -akwado mbinye ego ọmụrụ nwa dị ala yana inye ego maka iru eru mmepe mmepe obodo nke ndị otu ime obodo nyefere dị ka azụmaahịa. Ọdịniihu niile CCTN Community Lepyle Vacations na Tours ga -agụnye ntinye aka na COMFUND.
Emechaala mmekorita ya na ikpo okwu ekwentị mkpanaaka Caribbean nke akpọrọ TravelJamii nke a ga -ebido na Septemba 2021. Ngwa TravelJamii ga -enyere Global Community aka inweta ihe niile Caribbean, site n'ịkwalite njem nlegharị anya, njem ndị obodo, nnukwu aha, azụmaahịa mpaghara. , ebe nkiri, ihe omume, nri, akụkọ ihe mere eme, ọdịdị, akụkọ na ihe ndị ọzọ.
Dr. Samuel Lee Hancock, CM ekwu, sị:
September 2, 2021 na 20: 58
Ehihie ọma si Washington, DC Diana! Kedu ihe ịtụnanya Caribbean na mkpuchi ụwa niile nke "Obodo dị ka azụmaahịa" dịka akụkụ nke Networkstyle Community Tourism Network (CCTN). Nke gị bụ mmegharị dị ike na Jamaica na gafee mba 34, ókèala na ndabere nke Caribbean. Kedu nnukwu mgbasa ozi mba ụwa na mkpuchi maka ikpo okwu mmepe pụrụ iche na nke obodo.
Oge eruola ugbu a ka anyị kparịta maka mkpakọrịta mba ụwa nke Rotarians (IYFR) nke Caribbean na Latin America Fleets maka ikpuchi ọdọ mmiri Caribbean niile na EmeraldPlanet TV. Ndị a ga -abụ maka mgbasa ozi kwa ụbọchị ma na mpaghara ma na mba ụwa. Ecoturism nke obodo gị na agritourism na -eweta nkwukọrịta, nghọta, azụmahịa, ike nwanyị na obodo yana udo n'ofe Caribbean na gburugburu ụwa.
Na -ekerịta mmemme telivishọn gị, ihe ngosi na pọdkastị nke ndị otu gị pụtara ìhè…
(Ọ bụrụ na ejikọghị URL ahụ naanị detuo ma gafere na ihe nchọgharị weebụ gị. Nwee ọ journeyụ na njem gị!)
Mbụ: "Nduzi ụmụ nwanyị na -agbanwe obodo site na agụmakwụkwọ achụmnta ego na ọrụ ugbo na -adịgide adịgide"
EmeraldPlanet International Foundation, URL Mmemme YouTube:
Gosi '1' Isiokwu: "Imeghe ụzọ gaa n'ihu maka njem nlegharị anya obodo site na Jamaica na Caribbean" https://www.youtube.com/watch?v=hHfPMvROzuw
Gosi 'Isiokwu' 2 ': “Nduzi ụmụ nwanyị na ọzụzụ azụmaahịa maka azụmaahịa ndị njem nlegharị anya obodo” https://www.youtube.com/watch?v=GmBh80ZLTXY
Gosi '3' Isiokwu: "Ndi Nwanyi duziri oru ugbo azumahia di n'ime obodo" https://www.youtube.com/watch?v=vXxYeYdh5bI
Gosi '4' Isiokwu: "Ịkwanyere teknụzụ ụmụ amaala na ụdị ndụ ya"
Podcast “Ndị isi ụmụ nwanyị na -agbanwe obodo site na Mmụta achụmnta ego na ọrụ ugbo na -adịgide adịgide” Podcast: https://open.spotify.com/episode/3AV2XKvJiNzAzN4o6cBUf8?si=fyq35DBOThmwI7P1M0XFbg&nd=1
Ọtụtụ ekele kacha mma Diana maka mkpuchi mgbasa ozi a dị ebube yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ a ga -ekepụta n'ọdịnihu maka "Obodo dị ka azụmaahịa" dịka akụkụ nke Networkstyle Community Tourism Network (CCTN) ka anyị na -eme EmeraldPlanet ©.